मकवानपुर । प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक बर्ष २०७५ ÷७६ को निती तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । संसदको आज विहीबारको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको केही बुँदामा परेको संशोधन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले फिर्ता नलिएपछि बहुमतले पारित भयो । संशोधन दर्ता गराएको दल विवेकशील साझा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने...
कारागार व्यवस्थापनमा ३ नं. प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण
कैदी तथा बन्दीहरुको अधिकार प्रवद्र्धन परियोजना अन्तर्गत ३ नं. प्रदेशका माननीय ज्यूहरुसंग कैदी तथा बन्दीहरुको अधिकार प्रवद्र्धन तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धीगोष्ठी २०७५ जेठ २३ गते ३ नं. प्रदेशको केन्द्र हेटौडामा सम्पन्न भएको छ । यस गोष्ठीलाई नेपाल सरकार कारागार व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथाह्युम्यानिटी...
मकवानपुरका सबै स्थानीय तहमा महासंघ निर्माण
मकवानपुर । राज्यको पुनः संरचनासंगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको पनि पुन : संरचनाको अभियानले तिब्रता पाएको छ । अभियान अन्तर्गत मकवानपुरको दश वटै स्थानीय तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कार्य समिति गठन भएका छन् । जिल्ला तहमा जिल्ला स्तरको महासंघ गठन गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय महासचिव भारती पाठकले...
राजधानीका विषयमा के होला सहमती ?
मकवानपुर । प्रदेश ३ को प्रदेशसभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रदेशको राजधानीको विषय प्रदेशसभाले सहमतीको आधारमा टुङ्गो लगाउने बताए । उनले राजधानी र नामकरणको अधिकार प्रदेशसभालाई भएको बताए । हेटौंडा विकासको गतिमा अघि बढिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानी भएरमात्र विकास हुने नभई प्रदेशका सबै...
प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रम आउँदै
मकवानपुर । प्रदेश ३ सरकारले आज शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषयमा मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गर्दछ । असार १ गते बजेटको...
विरुवा रोपेर वातावरण दिवस मनाइयो
मकवानपुर । औ विश्व वातावरण दिवश २०७५ को अवसरमा विश्व वातावरण दिवस मुल आयोजक समारोह समितिको आयोजनामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज दोश्रो दिन हेटौंडा १० स्थित ल्यान्डफिल साईडमा विभिन्न प्रजातीका १०० वटा बिरुवा रोपिएको छ । कार्यक्रम ४६ औ विश्व वातावरण दिवस मुल आयोजक समारोह समितिका सम्योजक ध्रुव प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षता तथा...
आजका मकवानपुरका अखबार : प्रदेशसभाको बैठक, पानी उद्योगमा शिलबन्दीदेखि मकवानपुर नीपा भाइरसको जोखिममा
मकवानपुर । आज सोमबार मकवानपुरको हेटौंडाबाट प्रकाशित दैनिक अखबारले प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक सम्बन्धि खबरलाई स्थान दिएका छन् । हेटौंडा सन्देशले यो विषयलाई ‘सरकारमाथि आरोप धेरै, गुनगान कम ’ शिर्षकमा समाचार लेखेको छ भने साझाकुरा दैनिकले ‘ ३ नम्बर प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीले भने,‘कुराले भात पाक्कैदन, भात पाक्न आगो बोल्नैपर्छ ’...
शर्मालाई कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार
मकवानपुर । मकवानपुरका वरिष्ठ पत्रकार नवराज शर्मा कृष्ण सेन‘इच्छुक’ स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् । शर्मालाई आइतबार मकवानपुरको हेटौंडामा इच्छुकको १६ औं स्मृति दिवसका अवसरमा पुरस्कृत गरिएको हो । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल मकवानपुर शाखाले स्थापना गरेको नगद ५ हजार ५ सय ५५ रुपिया राशीबाट शर्मा सम्मानित भएका हुन्...
फित्ता बोकेर फिल्डमा उत्रिइन् उपाध्यक्ष राना
मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती रानाको संयोजकत्वमा विभिन्न योजनाहरु अनुगमन गरिएको छ । गाउँपालिकाको विभिन्न शिर्षकमा छुट्याइएको रकमबाट सम्पन्न र केही कार्य हुँदै गरेको याजनाहरुको अनुगमन गरिएको हो । उपाध्यक्ष रानाको संयोजकत्वमा भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर २ को वडा अध्यक्ष काशिराम बज्यु,वडा नम्बर ३ का...